Global Voices teny Malagasy » Ny Olana Rehefa Voafidy Ho Ben’ny Tanàna Any Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2013 23:25 GMT 1	 · Mpanoratra Gina Lentine Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Akon'ny RuNet
Evgeny Roizman (etsy ankavanana) ary Mikhail Prokhorov (ito ankavia), ny 24 Desambra 2011, sary an'i johnnnyick, CC 2.0.
Niafara tamin'ny fandresen'ilay mahery fo miady manokana amin'ny zava-maha-domelina sy mitera-dresabe no sady mpanohitra ary solombavam-bahoaka taloha tao amin'ny Douma, Evgeny Roizman, ny fifidianana ben'ny tanàna ny volana lasa teo tany Ekaterinbourg, izay nahazoany 33.21%  tamin'ny vato. Taorian'ny fifidianana, nanamafy an'i Roizman ho ben'ny tanàna tamin'ny fomba ofisialy ny Douma ao amin'ny Fanjakan'i Ekaterinbourg (tanatin'izay tokony atao hoe fizotra mahazatra). Raha nitanisa ny fomba ara-teknika, mpikambana efatra ao amin'ny parlemantan'ny tanàna avy amin'ireo antoko mpanohitra “A just Rosia” (Rosia Marina) sy ny Antokon'ny Mpisotro Ronono no nanohitra io fivoriana fametrahana azy io, izay nanao fitafy mitovy  tanatinà lapam-pitsarana iray ao amin'ny Distrikan'i Leninski ihany koa mba hanoherany ny maha-ara-dalàna ny fizotran'ny isa tratrarina amin'ilay fivoriana. Nilaza ireo mpanohitra ao amin'ny Douma am-panjakana fa tsy ampy isa ireo olom-boafidy nanatrika io fivoriana io, ary nisy fivoriana fanaraha-maso ny fanatanterahana izany natao avy hatrany taorian'izay, izay nandika ny lalàna.
Ny votoatin'ny fiampangan'ireo solombavam-bahoaka ireo dia ny hoe nisy nanodinkodina ny vato nandritra ny fifidianana tamin'ny volana lasa (tanatin'ireo birao hafa ankoatra ny an'ny ben'ny tanàna). “Tsy miady hevitra momba ny fahamarinan'ny vokatry ny fifidianana ben'ny tanàna izahay. Manana ben'ny tanàna voafidy ny tanàna,” hoy ny fanazavan'i [ru] Alexandr Burkov, avy ao amin'ny antoko “A Just Russia”, tamin'ny mpanao gazety tamin'ny voalohandohan'ity herinandro ity.
Ivelan'i Moskoa, ny fampielezan-kevitr'i Roizman angamba no tena nahasarika indrindra teo amin'ny tantara ara-politikan'i Rosia tamin'ity taona ity. Namboraka ny fifandrafiany amin'ny Governora eo an-toerana, Evgeny Kuivashev, i Roizman mpirotsaka tamin'ny anaran'ny Vovonan'ny antoko Sivily tsy miankina tarihan’‘i Mikhail Prokhorovy. Manoloana ny fandresen'i Roizman izay nampisy adihevitra goavana sy ny votoatin'ny fifandirana tsy mbola voavaha misy eo aminy sy i Kuivashev ary ireo manampahefana ao amin'ny faritr'i Sverdlovsk, inona no dikan'ireo fitohatohanan'ny zotra vaovao entina mankatoa ny ben'ny tanànan'i Ekaterinbourg ireo?
Nisy ireo niarahaba ny fankatoavana tsy misy henatra an'i Roizman. Manoratra ny mpampiasa ny LiveJournal teh_nomad  [ru] fa dia ampoizina ny hisian'ny fifandrafian-kevitra mandritra ny fotoana maharitra, ary miteny:
Mihevitra aho fa mikasika ny “fahalanian”‘i Roizman ho ben'ny tanàna, afaka miandry ireo karazana dingana sy fitantànana ara-pitsarana hafa rehetra isika. Satria tokoa, tsara ny mihaino amin'ny vaovao, mamaky anaty gazety, sy mijery amin'ireo fantsonà fahitalavitra rehetra ny fiheveran'ny mpampanoa lalànam-paritra fa ben'ny tanàna tsy ara-dalàna i Roizman. (Fanamarihana: ny teny Rosiana niaingàna no nakàna ny dikanteny ‘tsy ara-dalàna’ ampiasaina eto)
Mpitoraka bilaogy marobe no nandinika ny endrika mahatsikaikin'ny fifidianana natao tamin'ity taona ity tao Lekaterinbourg, izay hita ho marina kokoa nohon'ny tamin'ny taona lasa, nefa mbola misy ihany ny fitarainana mikasika ny fanodinkodinana vato. Manoloana ireo fitarainana nataon'ny mpanohitra, nanontany ilay olo-malaza eo amin'ny fahitalavitra mpifikitra amin'ny nentin-drazana, Vladimir Soloviev:
Ka ahoana, inona no manan-danja kokoa? Ny sitrapon'ny mpifidy, izay nitondra an'i Roizman tamin'ny fandresena nandritra ny fifidianana, sa ny an'ny mpampanoa lalàna aty amin'ny distrika?
iray mpampiasa ny Twitter, mitondra anarana mampiahiahy @992121 no naneso hoe :
Teo ampiandrasana aho no nanomboka nandrodana an'i Roizman ry zareo, nefa mbola tsy tafapetraka teo amin'ny toerana maha-ben'ny tanàna azy akory izy! Izao no antsoiko hoe “teatra / seho an-tsehatra politika” [!]
Niresaka mikasika io fifidianana io i Alexandr Rokhmistrov, mpampiasa LiveJournal, tanatinà lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ireo Olan'ny mpanohitra mikasika ny ben'ny tanàna: Tsy Lany i Navalny, ary Lazaina ho Tsy Ara-dalàna i Roizman” . Mandalina ara-filozofika ireo haratsian'ny fidirana amin'ny politika Rosiana (indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna) i Rokhmistrov, izay naneho ny heviny momba ny kolikoly mety hataon'ireo mpanao politika rehetra, ary nilaza fa na dia ireo kandidan'ny mpanohitra faran'izay tsy niankina aza dia nanjary lasa tafiditra anatin'ilay fanao:
Mipoitra daholo ireo karazana fakam-panahy rehetra rehefa any amin'ny toerana ambony, izay na dia ireo “mpiady amin'ny tsy rariny” faran'izay be mokon-doha aza dia miady mafy mba hahatohitra izany. Mety hiongana mivantana avy eo ambony ny sezan'ny birao mampahazo aina anao ianao amin'ny alalan'ny hetsi-panoherana eny an-dalambe, raha miezaka manohitra ireo fisarihana sy fakam-panahy rehetra.
Ny 3 oktobra 2013, nanamarina  [ru] ny maha-ara-dalàna ny fivorian'ny Douma am-panjakana izay nanamafy ny fandresen'i Roizman tamin'ny fifidianana ny lapam-pitsaran'i Yekaterinburg, nanaporofo ny fahadisoan'ireo mpitoraka bilaogy tahaka an'i teh_nomad, izay naminavina zotram-pitsarana fanaisorana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/17/52534/
 fitafy mitovy: http://www.itar-tass.com/en/c32/891984.html
 hoy ny fanazavan'i : http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/10/01/n_3221933.shtml
 October 1, 2013: https://twitter.com/VRSoloviev/statuses/384961688090333184
 October 1, 2013: https://twitter.com/992121/statuses/384967686347689984